चाउचाउ : स्वास्थ्यको लागि असरदायक, के हुन्छ चाउचाउमा खराबी ?
के हुन्छ चाउचाउमा खराबी ? चाउचाउको खराबी तत्कालै देखिने खालको हुँदैन । कुनैपनि तयारी चाउचाउ लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले बनाइएको हुन्छ । जसको लागि उनीहरुले अत्यधिक प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउने गरेका हुन्छन् । ती खानाहरुमा पौष्टिक सामग्रीहरु कम हुन्छन् भने फ्याट, क्यालोरी र सोडियम उच्च मात्रामा पाउने गरिएको हुन्छ । साथमा सुन्दर र मीठो देखाउनको लागि कृतिम रंगहरु, संरक्षणको लागि केमिकलहरु र थप फ्लेवरहरु समेत मिसाईएको हुन्छ । यो पनि स्वास्थ्यको लागि असरदायक हुन्छ ।
चाउचाउमा मैदाको असर धेरै जसो तयारी चाउचाउहरु मैदाबाट बनेको हुन्छ । त्यसमा गहुँको पिठोको पनि मिश्रण हुन्छ । हाम्रो स्वास्थ्यको लागि मैदा सबै अवस्थामा खराब हुँदैन । तर, चाउचाउमा प्रयोग गरिने मैदा धेरै प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउने भएकोले यो पोषणबिहीन भइदिने पोषणविद्हरु बताउँछन् ।
बोसोको नराम्रो असर सो अध्ययनमा लागेकी न्यूयोर्क विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक लिसा योङ भन्छिन् ‘तयारी चाउचाउमा उच्च मात्रामा चिल्लो पदार्थ, उच्च मात्रामा नुन र उच्च मात्रामा क्यालोरी प्रयोग गरिएको हुन्छ । साथमा त्यसलाई प्रशोधन पनि गरिएको हुन्छ । तयारी चाउचाउहरुमा स्याचुरेटेड ˆयाटहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । जसको मात्रा धेरै हुँदा वा नियमित रूपमा सेवन गर्दा रगतमा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्न जान्छ । उच्च कोलेस्ट्रोल हुँदा हृदय रोगको खतरा साथै मधुमेहको सम्भावना पनि बढ्छ ।’
कसरी बनाइन्छ चाउचाउ ? चाउचाउ मुख्यतया गहुँको पीठोबाट बनेको हुन्छ । यसमा बेसारको सहयोगमा यसलाई पहेँलो बनाउने गरिन्छ । यसमा मसालाको साथमा सुकेका तरकारी र प्रशोधन गरिएको तेलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि तयारी चाउचाउ बनाउने ठाउँमा अण्डाहरू, कुखुरा आदिलाई मिसाउने गरिन्छ । यसरी सबै सामग्रीहरु राखिसकेपछि त्यसलाई कुनै भाँडोमा राखेर त्यसको गुणबत्ता परीक्षण गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि थोरै पानीको समेत सहायताले सबै सामग्रीहरुलाई स्वचालित यन्त्रले नै धुलो बनाउने गरिन्छ । त्यसपछि अर्काे मेसिनमा राखेर त्यसलाई रोलिङ गरिन्छ । त्यही पिठोलाई अर्काे मेसिनले छिद्र छिद्र बनाइन्छ । यसरी विभिन्न किसिमको १२ प्रक्रियाद्वारा चाउचाउ बनाउने गरिन्छ । अनलाइनखबर